Imfihlelo yokuphumelela kwe-Helvetica typeface | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Imfihlo yokuphumelela kohlobo lohlobo lweHelvetica
Kunokwenzeka ukuthi, ngokuqinisekileyo konke oko IHelvetica luhlobo lweleta esetyenziswa kakhulu kwihlabathi liphela, kuba uya kuyibona nakweyiphi ikona yesitrato esixekweni ohlala kuso, kuwo onke amaphephancwadi owafundayo, kwizibhengezo, kwiiwebhusayithi ozindwendwelayo kwiimpawu zorhwebo, phakathi kwabanye.
IHelvetica iqulethe uhlobo lwefonti enobuchule obupheleleyo kwimvelaphi yayo, ekwaziyo ukudala ulwimi lwangoku kunye nolwangoku. Ngenxa yobume bayo obusebenzayo kunye nokungathathi hlangothi, olu hlobo lohlobo lohlobo indawo kunye nehlabathi, evumela ukuba ibe lolona hlobo luchanekileyo lokuchwetheza.
1 Imvelaphi ye-Helvetica typography
2 Ziintoni iimpawu zeHelvetica?
3 Phila ixesha elide?
Imvelaphi ye-Helvetica typography
Olu hlobo lochwethezi lwalunjalo yenziwe nguMax Miedinger kunye no-Edouard Hoffmann ngonyaka we-1957.
Eyona njongo iphambili yeHelvetica ukwandisa ukufundeka kunye nokubonelela ngokucacileyo, Ixesha langoku kunye nokungathathi hlangothi. Emva kweMfazwe yesibini yeHlabathi, uyilo lwalo hlobo lohlobo lohlobo olutshintshe ngokupheleleyo ukukhula kwalo kwaye lwaqala ukuhamba kwicala elahluke ngokupheleleyo, kuba lalifuna ukuba lolo hlobo lohlobo oluphendule ngokugqibeleleyo kwimfuno yokucacisa unobumba onokusetyenziswa nangaluphi na ulwazi lwangoku, ihlala ifundeka ngendlela eqondakalayo.
Impumelelo yalo mthombo emva kokunikezelwa kwawo wawumangalisa ngokwenene. Iinkampani ezininzi kunye noorhulumente bakwazi ukubona kwi-Helvetica isisombululo abasifunayo ukuze bakwazi ukuzibonakalisa ngokwabo kwihlabathi ngendlela abafuna ngayo, nokuba ibingeyiyo le nto imelwe ngulo mthombo: ukwenza izinto elubala, ukufikeleleka noxanduva.
Ngenxa yoyilo lwale nto typographic ifonti, ukongeza kwezinye izinto, zivumele i- IHelvetica yenye yobuso obuboniswe phambi kwehlabathi, kuba ibonelela ngobuntu, ithetha ngento malunga nawe kwaye kwangaxeshanye idlulisa iimvakalelo ezahlukeneyo. Kungenxa yoko le nto iye yaba yenye yeefayile ze- izixhobo eziphambili zonxibelelwano, Ukuphawula, ukongeza kwintengiso kunye nentengiso yeli xesha.
Ziintoni iimpawu zeHelvetica?
Iqukethe ifonti Unemali eseleyo efanelekileyo phakathi kobunzima kunye nokuchasana ngokonobumba ngamnye. Ikwayinto yokungathathi hlangothi, eqinileyo, elula kwaye, ngaphezu kwako konke, ubhalo olucacileyo, oluyivumela ukuba itolikwe ngeendlela ezahlukeneyo ngokomxholo ekuyo kunye nesakhelo sayo.
Ngenxa yezi mpawu zingasentla, olu hlobo lohlobo lokuchwetheza luvumela nabani na ukuba alusebenzise, ​​nokuba yintoni injongo eyenziweyo, kuba inokwenzeka Yisebenzise ngeendlela ezininzi ngaphandle kokuba iHelvetica ilahlekelwe ngumongo wayo, umzekelo kwiimpawu nakwizixeko ezikhulu okanye ngamanye amaziko omoya anje nge "American Airlines", ebonakalise ukuthembeka okukhulu kolu hlobo lohlobo, kuba ingakhange ilwenze ngokutsha uphawu lwayo.
Ukujongana nezi mpawu, iingcali ezininzi ziye zaxoxa ukuba ingaba iyabususa na ubuntu bayo kwaye nangona abanye "abagxeki" bekholelwa ukuba ngenxa yesantya sayo kunye nolwandiso olukhulu I-Helvetica inokuba yinto eqhelekileyo yokuchwetheza nokuba sele ikruqula ngandlel 'ithile, kangangokuba namhlanje isilahlile ngokupheleleyo isibheno ebinaso xa yayidalwa.
Ngokwaba baqulunqi, uhlobo oluchanekileyo lokuchwetheza kufuneka lube ne-spark kunye nokuqala, ezizimpawu uHelvetica angenazo, kuba kubo azinamandla, isimilo okanye intetho, ukuba ziluhlobo olufanayo kunye nokubekwa ngaphezulu.
Phila ixesha elide?
Umfanekiso kaErik Spiekermann obonisa ingxaki yeHelvetica
Ngaba ngoku ujonga iindlela ezintsha zokubonisa ezibonakalayo? Impendulo ngu-ewe kwaye kunjalo nanamhlanje kukho imigca yokuqhekeka komhlaba ezijike zibe yinto echaseneyo noko kumiselweyo noku-odolwa, okushiya ngasemva imfuno yokuhlambuluka nokucoceka kwileta nganye. Nangona kunjalo, abo ngokuthanda uHelvetica Abayicingi ngathi njengophawu lomhlaba jikelele kunye nomgangatho omiselweyo kwaye endaweni yoko bacinga ukuba bobobuqu, ukuba ukongeza ukubamba okwahlukileyo kuyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imfihlo yokuphumelela kohlobo lohlobo lweHelvetica
Uyilo lweplati okanye uyilo olucwangcisiweyo